Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Ukhenketho lwamazwe aphesheya lwehle ngama-83% kwikota yokuqala ka-2021
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Uhambo lweNdawo eNtofontofo • Iindaba zeShishini lokuhlangana • omnye • Ukuhamba ngololiwe • ukwakha uhambo kwakhona • Ukulinganiswa kweeholide • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Iindaba zeMibutho yoKhenketho • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
Ukhenketho lwamazwe aphesheya lwehle ngama-83% kwikota yokuqala ka-2021
Ugonyo lubonwa njengoluphambili ekuvuseleleni kweshishini lokhenketho kwihlabathi liphela kubhubhane we-COVID-19.
I-Asiya kunye nePasifiki baqhubekile nokufumana awona manqanaba asezantsi okhenketho lwamazwe aphesheya
IYurophu ibhale ukwehla kwesibini kukhenketho lwamanye amazwe nge -83%
Amathemba okubuyela kwimeko yesiqhelo kwilizwe liphela kwisithuba sika-Meyi-Agasti siphucuka kancinci
Phakathi kukaJanuwari nango-Matshi iindawo ezingama-2021 kwihlabathi liphela zamkele i-180 yezigidi ukufika kwamazwe aphesheya xa kuthelekiswa nekota yokuqala yonyaka ophelileyo.
I-Asiya kunye nePacific baqhubekile nokufumana awona manqanaba asezantsi omsebenzi nge-94% yokuhla kwabafiki bamanye amazwe kwisithuba seenyanga ezintathu.
IYurophu ibhale ukwehla kwesibini ngobukhulu nge -83%, ilandelwa yi-Afrika (-81%), Middle East (-78%) kunye neMelika (-71%).
Konke oku kulandela ukusukela kuma-73% awela kubakhenkethi bamazwe aphesheya abafikayo ngo-2020, nto leyo eyenza ukuba ibe ngunyaka ombi kwimbali yabantu.
Uphando lwakutsha nje lubonisa amathemba okuphuculwa kancinci kuka-Meyi-Agasti. Ngapha koko, isantya sokukhutshwa kogonyo kwezinye iimarike eziyimithombo ephambili kunye nemigaqo-nkqubo yokuqalisa ukhenketho ngokukhuselekileyo, ngakumbi iSatifikethi se-EU sobuGcisa obuDijithali, ziye zonyusa ithemba lokubuya kwezinye zeemarike.
Ngokubanzi, i-60% ilindele isaphulelo kukhenketho lwamazwe aphesheya kuphela ngo-2022, ukusuka kuma-50% kuvavanyo lwangoJanuwari 2021. I-40% eseleyo ibona ukubuyela umva ngo-2021, nangona oku kwehle kancinci kwipesenti ngoJanuwari.
Phantse isiqingatha seengcali asikuboni ukubuyela kumanqanaba okhenketho ehlabathi angama-2019 ngaphambi kowama-2024 okanye kamva, ngelixa ipesenti yabaphenduli ebonisa ukubuyela kumanqanaba angaphambi kobhubhane ngo-2023 iye yehla (37%), xa kuthelekiswa nophando lukaJanuwari.
Iingcali zezoKhenketho zikhomba kuqhubekeko lokumiselwa kwezithintelo zohambo kunye nokungabikho kolungelelwaniso kwiinkqubo zohambo nezempilo njengowona mqobo uphambili kwelo candelo.
Impembelelo ye-COVID-19 kukhenketho kunciphisa ukuthunyelwa kwelinye ilizwe nge-4%
Ukunyuka koqoqosho lwendyikitya yokufa kukhulu kakhulu. Iirisithi zokhenketho zamazwe aphesheya ngo-2020 zehle ngama-64% ngokwenyani (iimali zalapha ekhaya, amaxabiso angatshintshiyo), elingana nethontsi elingaphezulu kwe-US $ 900 yezigidigidi, lisika ixabiso lelizwe lonke kumazwe angaphandle ngaphezulu kwe-4% ngo-2020. Ukusuka kukhenketho lwamazwe aphesheya (kubandakanya ukuthuthwa kwabakhweli) kufikelela phantse kwi-US $ 1.1 trillion. I-Asiya kunye nePasifiki (-70% ngokwenyani) kunye nakuMbindi Mpuma (-69%) babone ezona zihla kakhulu kwiirisithi.